Umhla My Pet » Ngaba Ukulungele abazinikezele Pet?
ukubuyekezwa: Apr. 01 2020 | 2 min ukufunda
Into Ndaphawula ngoxa eyunivesithi isixa abantu ndandisazi bethenga kunye / okanye nokwamkela izilwanyana. Ndandinabahlobo endibaziyo ukuba baye ukufumana zonke iintlobo ezahlukeneyo izilwanyana kwiminyaka yabo post-yasesekondari imfundo-neekati, izinja, iintaka, intlanzi, imivundla, neencanda kunye imbiza iihagu isisu.
Oku kubonakala kakhulu singade ukubaleka ndizifunele isilwanyana kodwa ngaba ucinga yokuzinikezela olubangelwa kunye nesilwanyana? Ewe, pet wakho kunye nothando kwesibophelelo uze ube khona apho kuwe ebudeni zonke eziphakamileyo ngobuhle ebomini, kodwa ke zifuna ubanzima isuntswana unonophelo. Nazi iingcebiso ezimbalwa ukukunceda isigqibo ukuba ukulungele:
Izilo ukuzibophelela lwemali
Ezinye izilwanyana kunokuba ngeendleko eziphantsi kwaye ezinye izilwanyana ukuqala ngeendleko eziphantsi kodwa ngcembe kukudla i eninzi. Emveni kweminyaka, inja yam itshintshiwe ulondolozo kulula. Nguye inja encinci, ngoko azityayo ukudla kwakhe encinane kwaye kunqabile kwafuneka ukutyelela ugqirha. nokuba, yena ephantse 15 kwaye ngoku abalupheleyo nabagulayo. amayeza akhe ngendleko yingalo kunye umlenze nyanga nganye. njengabantu, izilwanyana bagula kungakhathaliseki ubudala okanye yokuphila. Onakho Shell imali, kwakunye ixesha isilwanyana sakho? Le yinto yokuba kufuneka kuthathelwe ingqalelo.
Izilo ixesha ukuzibophelela
Nangona ezinye izilo kuthiwa "nokugcinwa eliphantsi" ku sa funeka ixesha uzibophelele kubo yonke imihla. Ukondla, ekuzilungiseni umthambo nje izinto ezimbalwa ukuqwalasela xa kuziwa kwiinkqubo zokukhathalela imihla nesilwanyana. Ukuba uhamba rhoqo okanye ukuchitha ixesha elingakumbi esikolweni okanye emsebenzini ngoko ekhaya, ukuze abe ngumbono omhle ukubamba amangomso isilwanyana okwangoku. Kunokuba abe ngumthwalo kwabanye ukuba asoloko ebuza ukuba umphathe-kuhlala izilwanyana zakho gama ungekhoyo. Mhlawumbi xa ubomi bakho iba zinzile kuba lixesha inkulumbuso ukufumana isilwanyana.
Izilo ukuzibophelela ixesha elide
Nangona nesilwanyana kufanelekile yokuphila kwakho ngoku, Baya kunyaka ozayo? e 5 kwiminyaka? e 10 kwiminyaka? Ndiyaqonda umnqweno ukufumana isilwanyana, kodwa ukwamkela ukuba izilwanyana ukuzibophelela ixesha elide kuyimfuneko. abantu ezininzi ndiyazi lowo izilwanyana kwafuneka babanikele kamva phantsi endleleni kuba akaba saba ukunyamekela kubo. Kwafuneka ukuba isilwanyana esikolweni kodwa xa izidanga baza bafudukela kwisixeko entsha okanye igumbi bengakwazi nesilwanyana zabo kunye nabo. Yinto isigqibo akukho mntu ufuna ukwenza, ukuba ukwahlukana ngesilo othandekayo, mhlawumbi okwethutyana okanye ngokusisigxina. Efanayo Isibophelelo ixesha, mhlawumbi kufuneka silinde de yobomi bakho kunzima ngaphantsi kancinane.
Ngoko ngaphambi kokuba ndiphume amkele isilwanyana, ukwenza uphando yakho uze ucinge malunga nezicwangciso zakho elizayo. Khangela kwi uhlobo pet ofuna, into efunekayo ukuze ukuzinakekela kuzo kwaye ezo mfuno ilingane indlela yakho yangoku. Akukho nto iphosakeleyo kukulibala yokufumana isilwanyana de ulungele yakho, ngoko musani bangabangxameli isigqibo.
Ndinokubuphepha njani Incoko Abafileyo Zone Ugcine ekuxabeleni Out?
Ndithandana selula kwi 5 Amanyathelo Easy
Wayehamba ngemoto kunye isilwanyana sakho